DCN oo Kooban | Yunke China Information Technology Limited
Yunke China Information Technology Limited, oo hoosaad u ah Digital China (Shirkadda Waalidka) Kooxda (Lambarka saamiyada: SZ000034), waa aaladda hormuudka u ah qalabka isgaarsiinta xogta iyo bixiyaha xalka. Ka soo qaadashada Lenovo, DCN waxaa laga bilaabay suuqa shabakadda 1997 iyadoo la adeegsanayo falsafadda shirkadda ee ah "U-jahaysan macmiilka, Teknoolojiyadda lagu hoggaamiyo iyo doorbididda Adeegga".
DCN waxay diirada saareysaa goobta isgaarsiinta xogta oo leh khadad alaabeed oo buuxa, oo ay kujiraan Switch, Wireless, Router, Firewall Security iyo gateway, keydinta, adeegyada CPE iyo Cloud. Iyadoo la sii wado maalgashiga R&D, DCN waa hogaamiyaha bixiyaha xalka IPv6, shirkadii ugu horeysay ee Shiinaha ayaa ku guuleysatay shahaadada IPv6 Ready Gold iyo soo saaraha ugu horeeyay ee ku guuleystay OpenFlow v1.3 Shahaadada.
DCN waxay siisaa wax soo saar iyo xalka 60+ dal oo adduunka ah, waxayna sameysay xarun wakiil iyo adeeg ee CIS, Yurub, Aasiya, Ameerika iyo gobollada Bariga Dhexe. DCN waxay macaamiisha si guul leh ugu adeegtaa Waxbarashada, Dawlada, Hawl wadeenada, ISP, Marti gelinta, iyo SMB.
Iyada oo ku saleysan horumar madax-bannaan iyo hal-abuurnimo waarta, DCN waxay si joogto ah u bixisaa xalka shabakadda iyadoo la adeegsanayo wax soo saarka shabakad caqli leh, la isku halleyn karo oo isku dhafan iyo adeeg tayo leh macaamiisha
Cinwaanka: Lambarka 1068-3, Jimei North Avenue, Degmada Jimei, Xiamen
Taariikhda Horumarka ：
Shabakad caalami ah oo IPv6 shahaado ka heshay ah
Daahfurka xarumaha xogta ee furaya taageerida astaamaha hufnaanta; Launch wareejinta socodka ganacsiga furan ee ugu horreeya Shiinaha; La siiyay barnaamijka IPv6 ee muujinta CNGI ee Akadeemiyada Shiinaha ee Sayniska;
Bixi 1.2 beddelaad ee shabakadda SDN ee xarunta shabakadda ee Akadeemiyada Sayniska ee Shiinaha; Burcad khadadka sheyga beddelka xarunta xogta
Ku billow jiilka soo socda dariiqa xisaabinta xogta xarunta beddelka aasaasiga ah oo leh naqshad dhisme; Dcnos7.0 ayaa la bilaabay, sheyga oo dhami wuxuu taageeraa socodka furan; Daahfurka xalalka wax ku oolka ah ee caalamiga
DCN waxay ku biirtay ururka onf ee dufcado ku yaal Shiinaha, kii ugu horreeyay ee gudbiya shahaadada isku xirnaanta furitaanka 1.0
DCN waa soo saaraha ugu horeeya ee gudaha ah ee gudbiya shahaadada waxqabad ee OpenFlow V1.3
DCN taxanaha daabkeeda ugu khafiifsan dunida 802.11ac guddi AP ayaa liis garaysan oo si guul leh u degay Aaga Banaanbaxa Dib-u-habeynta Madaxbanaan ee Qaranka Zhongguancun.
Shirkaddu waxay soo bandhigtay noocyo kala duwan oo ah nooc ganacsi oo APS ah oo ku saleysan heerka 802.11ac WAVE2; ikhtiraacay seddex jeer sideed durdur AP wax soosaar ah wl8200-i3 (R2) si loo daboolo xaaladaha helitaanka cufnaanta sare;
Jiilka cusub SDN chip ku saleysan taxanaha dolomite cs6570 100g waxqabadka sare waxsoosaarka xarun wax soo saarka ayaa la soo saaray. Barmaamijka maareynta daruuraha ee loo yaqaan 'Imcloud Intelligent Cloud Cloud v2.0' ayaa la bilaabay, kaas oo taageera
Waxaa la aasaasay 2008, oo xaruntiisu tahay Beijing, waxay aasaastay laanta bayaanka canshuuraha ee Beijing iyo Laanta Hong Kong. Waqtigan xaadirka ah, waxay xafiisyo ku leedahay Changchun, Shenyang, Dalian, Zhengzhou, Hohhot, Shijiaz